June 2019 – MM File
အချစ်ရေးမှာ သင်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ သစ္စာရှိသူလဲ ?
အချစ်ရေးမှာ သင်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ သစ္စာရှိသူလဲ ? သင်က သူ့အပေါ် ဘယ်လိုတွေတောင် သစ္စာ ရှိတယ်ဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် အိမ်ထောင်ကျရင် ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ?
သင် အိမ်ထောင်ကျရင် ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ? အိမ်ထောင်ကျသွားရင် လူတိုင်းပြောင်းလဲသွားတက်ကြတာပါပဲ သင်ကရော ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ? ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးက ဘာများဖြစ်မလဲ ?
သင့်ရဲ. မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုးက ဘာများဖြစ်မလဲ ? မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုရင်တော့ ပြင်ကြရမှာပါ လူတိုင်းမှာ အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ရှိနေတက်ကြပါတယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း […]
သင်သာ ဓါးပြတိုက်စားရင် ဘာပစ္စည်းတွေ အများဆုံးရမလဲ ?
သင်သာ ဓါးပြတိုက်စားရင် ဘာပစ္စည်းတွေ အများဆုံးရမလဲ ? လူဆိုးကြီးဘဝအတွက် အဖြေရှာကြည့်လိုက်ရအောင်နော် အပျော်သဘောပေါ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
အချစ်ကြောင့် သင်ဘယ်လောက်ထိ ပျော်ရွှင်ရမလဲ ?
အချစ်ကြောင့် သင်ဘယ်လောက်ထိ ပျော်ရွှင်ရမလဲ ? ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိများ အချစ်ကြောင့် သင်ပျော်ဖူးသလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode အခဈြကွောငျ့ […]
သင့်ကို အခုမှ စပြီးမြင်ဖူးသူတွေက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ ထင်ကြလဲ ?
သင့်ကို အခုမှ စပြီးမြင်ဖူးသူတွေက အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ ထင်ကြလဲ ? သင်က နုနေသလား အိုစာနေပြီလား လူတွေအမြင်မှာ ဘယ်လို ရှိသလဲ ဆိုတာ . ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် […]
သင့်ဖူးစာရှင် ဖြစ်လာမယ့်သူက အရပ်ဘယ်လောက် မြင့်သူဖြစ်မလဲ ?
သင့်ဖူးစာရှင် ဖြစ်လာမယ့်သူက အရပ်ဘယ်လောက် မြင့်သူဖြစ်မလဲ ? ရင်ခွင်မှီအရပ်လား ဘာလား ညာလားဆိုတာ သိရဖို့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင် ပျော်ရွှင်တဲ့ နေရာက ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ ?
သင် ပျော်ရွှင်တဲ့ နေရာက ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ ? သင့် အသက်ဓာတ်လေး ပျော်ရွှင်တဲ့နေရာလို့ ဆိုလိုက်ရင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင်သာ အိမ်ထောင်မကျခဲ့ရင် သင့်အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိမလဲ ?
သင်သာ အိမ်ထောင်မကျခဲ့ရင် သင့်အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိမလဲ ? အခြေအနေကောင်းမလား ဘဝပဲပျက်နေမလား အဖြေရှာကြည့်ရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင့်ဖူးစာရှင်ရဲ. နာမည်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်ဖူးစာရှင်ရဲ. နာမည်က ဘာဖြစ်မလဲ ? နာမည်လေးသိထားတော့ ရင်ခုန်ရတာပေါ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျ့ဖူးစာရှငျရဲ. နာမညျက […]